သံလွင်: အောင်သိန်းလင်း..ဘာလဲ? ဒါဘဲ..ဟဲ..ဟဲ..
ဗိုလ်ဖိုက်တာ (Burma Media Wash ဝေဖန်သည် အဝေဖန်ခံသည်)
[သစ်ထူးလွင်ဝက်ဆိုဒ်တွင်ဖေါ်ပြထားသည့် ElevenMediaGroup ၏“မြစ်ဆုံဆည်အား မဖြစ်မနေ တည်ဆောက် ရမည်ဟု အာဏာရ USDP ပါတီ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းပြောကြား” ဟုခေါင်းစဉ်တတ် သတင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။]
တလုပ်နိုင်ငံထုတ် Southern Weekend သတင်းစာရဲ့ပလက်ဖေါင်းပေါ်တက်ပြီး၊လမ်းတစ်ချမ်းခင်းအောင်သိန်းလင်းက၊ဖိုက်တင်ဟန်ရေးပြခဲ့သဗျ။
…မိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသည့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီအစိုးရအဖွဲ့၏ နိုင်ငံတော်သမ္မတ..။
…အိမ်း,အောင်သိန်းလင်း နောက်ထပ်ချဲလဲင့် ခေါ်ဖို့၊ ဘာတွေများ ကျန်နေသေးတုန်းဗျာ..။ ဧကန္တ..အောင်သိန်းလင်း..တစ်ယောက်..ဟဲ..ဟဲ..။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အောင်သိန်းလင်းက..၊ မိမိ၏ကြံ့ဖွံ့ပါတီအစိုးရသမ္မတ, ဦးသိန်းစိန်ကို၊ မြစ်ဆုံကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မရိုမသေမလေးမစား ပြန်လှန်စွပ်စွဲစော်ကားလိုက်ပုံက-
“ဒါဟာ..သူ(သမ္မတ) ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်ပါ။ လွှတ်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒါကို ဆန့်ကျင် ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားရေး မူဝါဒမဟုတ်ပါဘူး။ သမ္မတဟာ တရုပ် မြန်မာဆက်ဆံရေးကို ပျက်ပြား အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်”..တဲ့။
အောင်မယ်လေး..လေး။အောင်သိန်းလင်း၏ မိုက်ရိုင်းချက်ကတော့၊ ကမ်းကုန်ပါရောဗျို့.။
အောင်သိန်းလင်းသည် မျက်ကန်းတစ္ဆေ မကြောက်သူပီပီ၊ ဘာမျှ မစဉ်းစား မထောက်ထားပဲ၊ နိုင်ငံရေးပြစ်မှုကြီးကို ပြောင် ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်လိုက်လေပြီ။
<နံပါတ် 1>...သမ္မတ၏ အတွေးအခေါ်ကိုနာမ်နှိမ်အပုတ်ချသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည်။
<နံပါတ် 2>........လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဦးသိန်းစိန်က လုပ်ခဲ့သည်မဟုတ်၍၊ မိမိ (အောင်သိန်းလင်း) က ဆန့် ကျင်ပါသည်..တဲ့။
ကောင်းပါပြီဗျား..။ ဦးသိန်းစိန်,က၊ ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ ဘောင်ထဲမှ လုပ်သည်ကို၊ မိမိက ဆန့်ကျင်သည်ဟု၊ အောင်သိန်းလင်း က ပြောတော့…
…..အောင်သိန်းလင်းသည် အဲဒီအခြေခံ ဥပဒေကို ချေးကုန်း စက္ကူစုတ်လုပ်ပစ်သည့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်လိုက်တာပဲဗျာ။
<နံပါတ်3>……အမျိုးသားရေးဆိုသည်မှာ၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ အရေးကိုဆိုလိုသည်ဖြစ်၍….
…တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ အလိုဆန္ဒအတိုင်း ဦးသိန်းစိန်က မြစ်ဆုံ အရေးဆောင်ရွက်သည်ကို၊ အမျိုးသားရေးမူဝါဒ အရ ဆောင်ရွက်ခြင်း မဟုတ်ဟုစွပ်စွဲခြင်းသည်…
…….အောင်သိန်းလင်းက နိုင်ငံတော်သမ္မတကို ဘလိုင်းစော်ကားသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘလိုင်းစော်ကားတာ မဟုတ်၊ မိမိ သိနားလည်သလို ပြောတာပါဟု၊ အောင်သိန်းလင်းက၊ ဆင်ခြေ, ဆင်လက်, ဆင်နားရွက်, ပေးလာအံ့..။ သည်ငနဲကို..အ,သုံးလုံး သင်တန်းသို့ မပို့ခဲ့သည့်..ယခင့် ယခင်, စစ်ဘုရင်..များကိုပင်, အပြစ်တင်, ရပေလိမ့်မည်။
<ကွန်ပြူတာပျက်သွားသဖြင့်၊ ‘အဆက်’ နောက်ကျသွားပါသည်။>
<နံပါတ်4>“သမ္မတဟာ၊ တလုပ် မြန်မာဆက်ဆံရေးကို ပျက်ပြားအောင်လုပ်ခဲပါတယ်”..တဲ့။
ဦးသိန်းစိန်က မြစ်ဆုံကိစ္စမှာ အမျိုးသားရေး ရပ်တည်ချက်ဖြင့် လုပ်ခဲ့သည်ကို၊ အောင်သိန်းလင်းက, တလုပ်ဘက်ကရပ်ပြီး၊ ဆတ်ဆတ်ခါ နာနေသည်။
သည်ငနဲ,ဟာ၊ တလုပ်အား နှမပေးထားသည့် ‘တလုပ်ရဲ့ နှမပေးယောက်ဖ’..ဖြစ်လျှင်,ဖြစ်.။ သို့မဟုတ်လျှင်..‘အလုပ်မရှိ၊ လှေလှော်။ တလုပ်ငတိ၊ အဖေခေါ်’သည့်၊ တလုပ်၏ မယားပါးသားဖြစ်ကို, ဖြစ်ရမည်။
အဲဒီလိုဖြစ်၍သာ၊ သူ့ပါတီရဲ့ အစိုးရ သမ္မတ၏ ပါးကို၊ လူစီးဖိနပ်နဲ့ အားမရ၊ ဆင်စီးဖိနပ်နဲ့ ပြန်ချတာပေါ့ဗျာ..။
သည်ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခြင်းကို ထောက်လျှင်၊ အောင်သိန်းလင်းသည် ‘အမျိုးသားရေးသမား’..မဟုတ်။ ..‘တလုပ်ရေးသမား’..၊ ‘ငါရေးသမား’..၊ တစ်နည်းအားဖြင့်.. ငါ့ဘို့ တစ်ဘို့တည်းကိုသာ ကြည့်သည့်၊ ‘တစ်ဘို့ရေးသမား..နွား’.. ဧကန်ဧက, ဖြစ်ကို, ဖြစ်ရ, မည်။
<နံပါတ်5> ‘တစ်ဘို့ရေးသမား…နွား’အောင်သိန်းလင်းက၊ (မြစ်ဆုံဆည်ကို). .“ဆောက်ကို.. ဆောက်ရမှာပေါ့။ ကျွန်တော် တို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုတယ်”..တဲ့။
ဓာတ်ငွေ့တွေကို၊ တလုပ် ပထွေးအား ရောင်းစားတော့၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလို ရသပေါ့ဗျာ..။
<နံပါတ်6>…အောင်သိန်းလင်းက ဆက်ပြောပါသေးတယ်။ “အနောက်နိုင်ငံတွေက၊ ဒါကိုရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့..၊ တလုပ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားအောင် လုပ်ခဲ့တာပါ”..တဲ့။
အနောက်နိုင်ငံတွေ ဆိုတဲ့အထဲမှာ၊ အမေရိကန်ကို ထိပ်ဆုံးမှာထားပြီး အပြစ်တင်ပြောဆိုသွားတာ..၊ ဖြစ်မှာပါ။
အောင်သိန်းလင်းကို၊ သူ..နားလည်နိုင်မည့် ဘာသာစကားဖြင့် ပြောရလျှင်…
..နင့်ပထွေး အဖေကြီး ဗိုလ်နေ၀င် (ဗိုလ်နေ၀င်း, မဟုတ်ဖူးနော်။ဗိုလ်နေ၀င်) ကအစ, စစ်အာဏာရှင် တစ်ပြုံလုံးက၊ နင်တို့ ကို ‘နံ’တယ် ဆိုပြီး အကပ်မခံလို့၊ အမေရိကန်ကို ‘စပျစ်သီး၊ချဉ်တယ်’လုပ်နေတာ၊ အားလုံးကအသိပါ..။
အမေရိကန်ကသာ..‘ဟိတ်..လာခဲ့’လို့ လက်ဖျောက်တီး လိုက်ရင်၊ နင်တို့တတွေ, ဆီပုလင်း ခါးထိုးပြီး လေးဘက်ထောက် ပြေး ကြမှာကိုလည်း၊ အားလုံးက အသိပါ.ဟဲ.ဟဲ.ဟုတ်တယ်နော်.ဟဲ..ဟဲ..။
တလုပ် မြန်မာဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားအောင်’ ဆိုတာကလည်း၊ တလုပ် အလွဲသုံးစား လုပ်တဲ့ဗီတိုကို မရမှာစိုးလို့ ပြောနေ တယ် ဆိုတာလည်း၊ အားလုံးကအသိ။
<မိတ်ဆွေများခင်ဗျား..ကွန်ပြူတာက၊ ဖေါက်လာပြန်ပါပြီ။ အောင်သိန်းလင်းက သူကိုယ်တိုင် အမဲသား အစိမ်းကျွေးပြီး မွေးထားတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့၊ အနှောက်အယှက်ပြုနေတယ်.. ထင်ပါ့..ဟဲ..ဟဲ. မနက်ဖန်ကွန်ပြူတာ ဆြာလာပြီး, ထပ်ပြင်ဦးမှာပါ။ ဆက်ရန်ရှိသည်များကို ဆက်ပြီးလျှင်… ..ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကျာကူလီအေးကျူ ဌေးဦး, ဖါတာနှင့်.လမ်း တစ်ချမ်းခင်း…လျှော ချတာကိုဆက်ပါဦ မည်။.>